ट्विटरले लगायाे ट्रम्पको एकाउन्टमाथि स्थायी प्रतिबन्ध ! - News Portal in Nepali
ट्विटरले लगायाे ट्रम्पको एकाउन्टमाथि स्थायी प्रतिबन्ध !
स्टिम न्युज वि.सं २५ पुष २०७७, शनिबार ०८:०६
काठमाडौं: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्वीटर खाता (अकाउण्ट) सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरले सधैँका लागि बन्द गरिदिएको छ ।
ट्रम्पका पछिल्ला अवैध गतिविधी र त्यहीसँग सम्बन्धित भद्धा पोस्टका कारण खाता स्थायी रुपमा निलम्बन गरिएको ट्वीटरले जनाएको छ । ट्रम्पले हिंसालाई उकास्ने खतरा रहेको कारण ट्रम्पको ट्वीटर खाता स्थायीरुपमा निलम्बन गरेको ट्वीटरलाई उदृत गर्दै गर्दै बीबीसीले जनाएको छ । ट्वीटरले लेखेको छ, ‘हालै उनले गरेका ट्वीटको समीक्षा र घटना विचार गर्दा थप हिंसा भड्काउने जोखिम देखिएपछि हामीले राष्ट्रपति ट्रम्पको अकाउन्ट स्थायी रूपमै बन्द गरिदिएका छौँ।’
चुनावी परिणाम अस्वीकार गर्ने क्रममा ट्रम्पका समर्थकहरूले बुधबार अमेरिकी संसदमै हमला गर्दा एक जना प्रहरी अधिकारीसहित ६ जनाको ज्यान गएको थियो । घटनापछि जनावरी ६ बाट खातामा १२ घण्टासम्म प्रतिबन्ध लगाएको ट्वीटरले ट्रम्पको खाता बन्द गरिदिएको हो । पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै अब उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर चलाउन नपाउने भएका छन् ।
यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनको पद तथा गोपनीयताको शपथ कार्यक्रममा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अनुपस्थित हुने भएका छन् । ट्रम्पले ट्वीट गर्दै सपथ आफूले बहिस्कार गर्ने आसयको जानकारी दिएका हुन् । संसद हमलाको घटना लगत्तै सामाजिक सञ्जालहरूमा ट्रम्पमाथि प्रतिबन्ध लागेको थियो ।
१२ घण्टापछि ट्वीटरले प्रतिबन्ध हटाएलगत्तै ट्रम्पले शान्तिपूर्ण ढंगले सत्ता हस्तान्तरण हुने पोस्ट गरेका थिए । त्यसपछि अर्को ट्वीटमा जनवरी २० मा आयोजना हुने बाइडेनको शपथमा आफू सहभागी नहुने जानकारी गराए ।
बाइडेनको जित अस्वीकार गर्न ट्रम्पकै उक्साहटमा अमेरिकाको संसदमा हमला भएको आरोप लगाइएको छ । आक्रमणपछि पनि ट्रम्पले हिंसा भड्काउने पोस्ट जारी राखेकोभन्दै ट्वीटरले उनीमाथि सधैँका लागि प्रतिबन्ध लगाइदिएको हो ।